Kedu ihe bụ ụdị mpụga ama ama ama n’ụwa niile?
Arc 'Teryx （Canada): Ahịa kachasị elu nke Canada, nke e guzobere na VANCOUVER, Canada na 1989, isi ụlọ ọrụ ya, ụlọ ọrụ imepụta ya, na usoro mmepụta ya ka dị na Vancouver. N'ihi na ọ fọrọ nke nta ka nzuzu ịchụso ọrụ ọhụrụ na teknụzụ ọhụrụ, n'ime ihe karịrị afọ iri, ọ toro ...
Covid-19 ewetawo nnukwu mmetụta na nnwale na ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ
Na ọkara nke mbụ nke 2020, mberede mberede nke coVID-19 tinyere ụlọ ọrụ azụmaahịa zuru ụwa ọnụ, gụnyere ụlọ ọrụ akwa, na mmetụta dị ukwuu na nnwale. N'okpuru nduzi siri ike nke CPC Central Committee, ọnọdụ nke igbochi ọrịa na ịchịkwa ọrịa na-aga n'ihu na-aga n'ihu na mma, ndị ...
Pụ n'oge oyi, gburugburu dị iche iche, oge dị iche iche, ụzọ dị iche iche, afọ dị iche iche, nhọrọ uwe ndị dị n'èzí dị iche. Yabụ kedu ka ịhọrọ? 1. Mụta ụkpụrụ atọ ndị a Site n'ime ruo n'èzí, ha bụ: ọsụsọ oyi akwa-akwa oyi akwa-akwa oyi akwa. N'ikwu okwu n'ozuzu, ndị ...
Bụ otu ụlọ ọrụ azụmaahịa na China, nke bụ ọkachamara na uwe maka ihe karịrị afọ 10. Ngwaahịa ndị bụ isi gụnyere Jacket, Parka, Waistcoats, Pants, Shorts, N'ozuzu, ụdị mmiri ozuzo niile, dịka Raincoat, Rain poncho. Nakwa ikpere, mpempe aka, akwa nhicha ngwa ngwa, plastic ...